Ningabalibali Abo Basentolongweni—AmaNgqina KaYehova
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiChitumbuka IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
I-Article 18 ye-International Covenant on Civil and Political Rights * ithi, wonke umntu “unelungelo lokuba nenkululeko yokucinga, yesazela neyonqulo.” Kwamanye amazwe amaNgqina kaYehova aye avalelwe ezintolongweni okanye aphathwe kakubi kuba nje esebenzisa eli lungelo. Uninzi lwaba bavalelwayo ngabafana abaye abavuma ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Abanye babanjwa kuba nje bengamaNgqina.
Le mpatho-mbi ayiwenzi angathembeki amaNgqina kaYehova kunqulo lwawo. Kunoko, ibhenca oorhulumente abangawahloneliyo amalungelo abantu. Apha ngezantsi kuboniswe amazwe aye avalela amaNgqina kaYehova nenani labavalelweyo kwilizwe ngalinye.
Uludwe lwabo bebesele bevalelwe ngoNovemba 12, 2013
Ingxelo yakutshanje ibonisa ukuba amadoda namabhinqa angamaNgqina kaYehova ayi-52 athothoza kwiimeko ezinzima entolongweni. Nangona engekho amaNgqina amangalelwe ngokusemthethweni okanye asiwa enkundleni, abanjwe kuba izazela zawo zingawavumeli ukuba aye emkhosini okanye ngenxa yezinye izizathu ezingachazwanga. UPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam baye babanjwa iminyaka ephantse ibeyi-20 ukususela ngoSeptemba 24, 1994, kuba izazela zabo zingabavumeli ukuba baye emkhosini. UMisghina Gebretinsae noYohannes Haile, amaNgqina kaYehova amabini ayeneminyaka engaphezu kweyi-60, afela entolongweni. Oko iEritrea yaba lilizwe elizimeleyo ngo-1993, ibisoloko ivalela, ixhaphaza ize iphathe kakubi amaNgqina kaYehova.
Sithethanje abafana abangamaNgqina abayi-599 bagwetywe iinyanga eziyi-18 ngapha kwezitshixo kuba bengavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ukususela kwixesha leMfazwe yaseKorea ukuza kuthi ga namhlanje, uMzantsi Korea uye wabarhuqel’ enkundleni abafana abangamaNgqina abangavumiyo ukuya emkhosini, ibe awukabi nasisombululo kule ngxaki. Ebudeni beli xesha, uMzantsi Korea uye wagweba amaNgqina ayi-17 549, ibe xa idityanisiwe iminyaka agwetywe yona iyi-34 100. UMzantsi Korea uye wasilela ukuhambisana nesivumelwano osenze namazwe ngamazwe, ibe uye awavuma ukuhlonela amalungelo abantu abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi funda inqaku elithi Abantu Ehlabathini Bakhalela Impatho-mbi KuMzantsi Korea.
Omnye umfana oliNgqina oneminyaka eyi-20 usentolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe yaye ilizwe ahlala kulo iNagorno-Karabakh alinayo imisebenzi umntu anokukhetha ukuyenza endaweni yokuya emkhosini. NgoDisemba 30, 2011, wagwetywa iinyanga eziyi-30 entolongweni yaye ngoJanuwari 29, 2013 isicelo sakhe sokukhululwa phantsi kwemiqathango sakhatywa. Lo mfana uyagula, ngoko kuye kwenziwa isicelo sokuba akhululwe ngenxa yokukhathazwa yimpilo, naso esi isicelo siye sakhatywa ngawo omane ngamagunya entolongo.
Urhulumente waseSingapore uyabanyanzela abemi balapho ukuba baye emkhosini ibe akawakhathalelanga amalungelo abo balayo ukuya kuba izazela zabo zingabavumeli. Abafana abayi-18 abakhonza namaNgqina kaYehova nabangafuniyo ukuya emkhosini kuba bethobela iBhayibhile bathothoza iinyanga eziyi-39 kwintolongo yomkhosi. Elinye iNgqina liye lakhululwa ngoAgasti 2013 emva konyaka lingaphaya kwezitshixo ngenxa yokwala ukuya emkhosini.
Sithethanje amadoda asithoba angamaNgqina asentolongweni eTurkmenistan. Asibhozo kuwo abanjelwe ukungavumi ukuya emkhosini ukanti enye yona ibanjwe ngezityholo zobuxoki. La madoda agwetywe iinyanga eziyi-12 ukuya kweziyi-24 ibe adla ngobethwa kanobomi ngoonogada basentolongweni namajoni. Naxa bekhululwe badla ngokuphinda babanjelwe into efanayo kusithiwa baneenkani baze baphathwe qatha nangakumbi kunakuqala.
^ isiqe. 2 Funda i-Article 18 ye-United Nations Universal Declaration of Human Rights, ne-Article 9 ye-European Convention on Human Rights.